Keligaa Ma Aha Ee Aamus Adeer | Somaliland.Org
Keligaa Ma Aha Ee Aamus Adeer
July 28, 2008	DALJIRE
Keligaa Ma Aha Ee Aamus Adeer. By A. Geeljire
Doolaal:Waar maxay ahayd tan yar ee aad aamusiinaysay? Yaa dilay? miyaad garanaysay?
Dubbe:Waar waxa i qabsaday haddaad ogtahay. waa mar labaadkii ay igu dhacday maanta.
Doolaal:Iminkaad waxa lagu weydiiyo mooyee wax kale ka jawaabi. Maxaa kugu dhacay?
Dubbe:Waxa igu dhacay. Ta yar oo ooyaysa ayuumbaan idhi. “adeer maxaa ku helay?” “…Wuu na dilay.” bay tidhi. “Kumaa ku dilay?” Baan idhi. “Daahir.” bay tidhi. ” markiiba waxaan mooday inay Ina Rayaale sheegayso oo uu carrurtiina soo gaadhay markaasaan lahaa ” adeer keligaa maahee iska aamu.” Saakana nin waalan oo isla hadalaya oo leh. “Wallaahi inaan madaxaa xun ee weyn ku dhuf. Oo anagu wax walba nagu qabsanayaa…” ayaan mooday inuu isna Ina Rayaale sheegayo. Markaasaan idhi. ma hadduu dadkii waallaan wax ku qabsaday?
Doolaal:Waar muxuu ku ku hadlayaa? waar qaadkii ma wax kale ayaad ku dartaa beryahan? Ma qolada tidhaa waanu iska jebinaa b aad ku biirtay? sidaad u mooddaa inuu nin waalani Madaxweynaha ka hadlayo ama gabadh yar?
Dubbe:Dee inaadeer horta hayla yaabine ninkii weynaa ee aynu dalka u dhiibnay sawkan maalin wal walba,ama koox ha ahaato ama keli ha ahaato eh ay cid is haystaan. sawkan kolba riig ku murmaya ama neef xoola ah.
Doolaal:Maxaa is haysta ee aad sheegaysaa? Ma waxbuu maamulayaa oo isagaa la haystaa mise isagaa wax haysta?
Dubbe:anigu dhankaan ka taagnay isagaa wax haysta horena waan kuugu sheegay. Meel walba dan gaar ah uu leeyahay ayuu faraha ugula jiraa ama cid baa dabada ka soo kaxaysa oo dadka ku soo hagaajisa. Imisa ayuumbaanu maqaylanay waxaa?
Doolaal:Waar iminka yay is haystaan ee aad sheegaysaa? Dadku haddii aanay xukuumadda u hoggaansamin maxaynu ku falaynaa gebegeedaba? maxay iska xiijinaynaa?
Dubbe:Qoodhaa iyo xeradaa intaynu halkaa ku qayilaynay imisaynnu maqallay? Qayladii soo yeedhaaba waa Ina Rayaale iyo oo dad ka laalaada. Ina Rayaale iyo waxa is haysta Xaaskii Ina Cigaal ka dhintay. Ina Rayaale iyo Wakiiladii baa is haysta. Ina Rayaale ayaa Hadraawi haysta. Ina Rayaale ayaa Gaarriye haysta. Ina Rayaale ayaa mujaahidiin dhul ku haysta. Ina Rayaale ayaa Aamina weris shaqo ku haysta. Ina Rayaale ayaa Wasiir Nuux sigaar ku haysta. Ina Rayaale ayaa Ilma Farax Xarbi dekeddii ku ku haysta. Ina Rayaale ayaa islaamo agoona xaqii ku haysta. Ina Rayaale ayaa Ina Cabdi Gaboobe haysta. Ina Rayaale ayaa Abshir haysta. Ina Rayaale ayaa qolo iskaraab dhoofinaysay haysta. Ina Rayaale ayaa badda qaar ka kalluumaysanayay ku qabsaday. Ina rayaale qolo Habar Jeclo ah oo karinka wax ka dhoofinaysa ayaa is haysta. Ina Rayaale Komishankii baa is haysta. Ina Rayaale Saleebaan Gaal baa is haysta. Ina Rayaale iyo Xaji Cabdi Waraabe ayaa is haysta(berigii uu Xaajigu Guddomiyaha Guurtida doonayay). Ina Rayaale iyo Adhiiylayaashii baa is haysta. Ina Rayaale iyo Ku-xigeenka ayaa is haysta. Ina Rayaale deeq-bixiyeyaashii baa is haysta. Ina Rayaale iyo qolo Jaaliyaddii debedda ee UK baaa is haysta. Ina Rayaale reer dumbuluq baa riig isku haysta. Ina Rayaale iyo Djibouti baa is haysta. Ina Rayaale iyo fanaaniintii baa is haysta. Ina Rayaale iyo salaadiintii baa is haysta. Ina Rayaale Ina Afdiinle ayaa is haysta. Ina Rayaale waxa is haysta Saxaafaddii. iyo qaar kaleoo badan.
Doolaal:Oo Ina Afdiinlana goormay is qabsadeen?
Dubbe:Miyaanu Ina rayaale isku deyin inuu qaadka ku wareejiyo ninkii ay shuraakada ahaanjireen beriguu qaadlaha ahaa iyo nin Oromo ah? Miyaanu dabdeed Ina Afdiinle sutida u qaban oo arrimahiisa dhankaa iyo Ethiopia ka sallaxan? Waar iska aamu ninyow. Meel shilin ka soo baxayo oo aanu faraha kula jirini ama aanu isku duubini ma jitro.
Doolaal:Waar waxaasi wax jira maaha. Ma mqalba anigu.
Dubbe:Waar adigu wax ma maqashid waxna ma uruside waxaan ku weydiiyay sheekadan iminka aydin la timaadeen ee waxa walba odhanaysaan Embagathi baa ka dambaysay waa maxay? Embagathi ma adhigeena ay Aljabiri u xidhay? Mise riiggii biyaha ayay maamulaysay? Waar dee malaa waynaan ogayne Ina Rayaale ayaa Embagathi ah.
Doolaal:Saw cadagu kuma soo dhuumanayo hawsha qaranka loo wado oo dadka iyo dawladda kala dhex geli maayaan?
Dubbe:Waar dhegeysta waryaa. Embagathi iyo Caliyo lahayninee. Meesha waxa yaalla waa adhiga waan dhoofinayaa iyo dhoofin maysid. Idinkaana muranka abuuray. Ta kale waxaan arkay cid waliba cidday necebtay bay Embagathi u taqaan.Ina Rayaale ciddii ka soo hor jeedda oo dhan buu Embagathi u yaqaan. Ina Cali Waraabe cidii aan Ciidagale ahayn ee daantaa Dumbulq deggan buu Embagathi u yaqaan. Ina Bullaale Habar Jeclada ayuu Embagaathi u yaqaan. Waar Embagathina ma jirto oo iyadii sidii geel qasaal ah sibraha wax ka da’ayaan ee dadka wareerka kala fadhiista.
Doolaal:Waar Embagaathida waa la yaqaane iska dhaafo odaygii Ina Xaabsade ee aanu xaggiina u tirinaynay sawkan saddexdii xisbiba isku dugaadheeyay.
Dubbe:Waar ma aragtay horta? Waaban la yaabay. Waar odaygu markuu saddexdii xisbi qaran ee umaddaa dhan ee sheikh iyo shariifba lihi ku jireen markuu quudhsaday ee yasay ee yidhi “wax saxan ma aha.” Muxuu ujeeday? Anigu waxaan is idhi malaa waxaasi waa ka kibir iyo isla-weynaan. Ama wuxuu doonayaa xisbi Dhulbahante u gaar ah oo uu cidii aan Ba Hararsame ahayn uu yidhaahdo “waar aamus inan gumeedyow laan gaabka ahi. Kufurtu billaahi inaan dhengadayn waxakan”
Doolaal:Waar maahee odayga sidaa ha odhan way la noqon weyday inuu mid uun xisbiyada galo eh.
Dubbe:Waar odaygu hadduu cilmo uu xisbiyada ku faaqido leeyahay Siciid Sulub kolba uma raaceen meel dadka laga soo caayayo ee naga daa.
Waa inoo toddobaadka dambe Haddii Eebe idmo.